लूका १ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
१ धेरै जनाले ती सम्पूर्ण घटनाहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने र लेख्ने प्रयास गरेका छन्‌, जुन हामी विश्वास गर्छौं २ अनि प्रत्यक्षदर्शी र सुसमाचार सुनाउने सेवकहरूले सुरुदेखि नै हामीलाई ती सुनाएका पनि हुन्‌। ३ हे महामहिम थियोफिलस, सुरुदेखिका सबै घटना ठीक-ठीक पत्ता लगाएको हुनाले तपाईंका लागि ती घटनाहरू क्रमैअनुसार लेखिदिने निर्णय मैले पनि गरें, ४ ताकि मौखिक रूपमा तपाईंलाई सिकाइएका कुराहरू भरपर्दा छन्‌ भनेर तपाईंलाई राम्ररी थाह होस्। ५ यहूदियाका राजा, हेरोदको* पालामा जकरिया नाम गरेका एक जना पुजारी थिए। तिनी अबियाह दलका थिए र तिनकी पत्नी हारून वंशकी थिइन्‌ र उनको नाम इलीशिबा थियो। ६ यहोवाका सबै आज्ञा र नियमहरूअनुसार निर्दोष भई हिंडेको हुनाले तिनीहरू दुवै जना परमेश्वरको नजरमा असल थिए। ७ तर तिनीहरूको बालबच्चा थिएन, किनकि इलीशिबा बाँझी थिइन्‌ र तिनीहरू दुवैको उमेर ढल्किसकेको थियो। ८ जब तिनी आफ्नो दलको पालोअनुसार परमेश्वरसामु पुजारीको काम गर्दै थिए, ९ तब पुजारीहरूको चलनअनुसार धूप चढाउने तिनको पालो पऱ्यो र तिनी यहोवाको मन्दिरभित्र पसे। १० अनि धूप चढाउने बेलामा मानिसहरूको भीड बाहिर प्रार्थना गरिरहेको थियो। ११ तब यहोवाको स्वर्गदूत तिनीकहाँ देखा परे। ती स्वर्गदूत धूप चढाउने वेदीको दाहिनेतिर उभिरहेका थिए। १२ यो देखेर जकरिया अत्तालिए र तिनलाई डरले छोप्यो। १३ तर ती स्वर्गदूतले तिनलाई भने: “नडराऊ जकरिया, किनभने तिम्रो उत्कट बिन्तीको सुनुवाइ भएको छ। तिम्री पत्नी इलीशिबाले तिमीबाट एउटा छोरो जन्माउनेछिन्‌ अनि तिमीले उसको नाम यूहन्ना राख्नू। १४ तिमी खुसी र अति प्रसन्न हुनेछौ अनि उसको जन्म भएकोमा धेरै जना रमाउनेछन्‌, १५ किनकि ऊ यहोवाको नजरमा महान्‌ हुनेछ। तर उसले दाखमद्य* वा अरू कुनै मद्य पटक्कै पिउनु हुँदैन। ऊ आमाको गर्भैदेखि पवित्र शक्तिले * भरिपूर्ण हुनेछ। १६ अनि उसले इस्राएलका सन्तानहरूमध्ये धेरै जनालाई तिनीहरूका परमेश्वर यहोवातर्फ फर्काउनेछ। १७ साथै, बुबाहरूको मनलाई छोराछोरीको जस्तो बनाउन,* अनाज्ञाकारीहरूलाई परमेश्वरको स्तरबमोजिम असल काम गर्ने मानिसहरूको बुद्धि दिन अनि यसरी यहोवाको निम्ति सुहाउँदो मानिसहरू तयार पार्न ऊ एलियाको जोस* र शक्तिका साथ उहाँको अघि-अघि जानेछ।” १८ तब जकरियाले स्वर्गदूतलाई सोधे: “यो कुरा अवश्य हुन्छ भनेर म कसरी पत्याऊँ? किनकि म बूढो भइसकें अनि मेरी पत्नीको उमेर पनि ढल्किसक्यो।” १९ स्वर्गदूतले तिनलाई जवाफ दिए: “म परमेश्वरसामु हाजिर भइरहने गब्रिएल हुँ। तिमीसित कुरा गर्न र तिमीलाई यो सुसमाचार सुनाउन मलाई पठाइएको हो। २० अब हेर, यी कुरा पूरा नहोउन्जेल तिमी गुँगो हुनेछौ र बोल्न सक्नेछैनौ, किनकि मैले भनेको कुरा तिमीले पत्याएनौ, जुन तोकिएको समयमा पूरा हुनेछ।” २१ त्यतिन्जेल मानिसहरूचाहिं बाहिर जकरियालाई पर्खिरहेका थिए तर तिनले मन्दिरबाट निस्कन ढिलो गरेकोले तिनीहरू अचम्म मान्न थाले। २२ जब तिनी बाहिर निस्के, तिनी बोल्नै सकेनन्‌। त्यसैले तिनले भर्खरै मन्दिरमा कुनै अलौकिक घटना देखेछन्‌ भनेर उनीहरूले लख काटे। तिनले उनीहरूसित इशारामा कुरा गर्न थाले र तिनी गुँगो नै रहिरहे। २३ जब मन्दिरमा सेवा गर्ने तिनको पालो सिद्धियो, तब तिनी आफ्नो घर गए। २४ त्यसपछि तिनकी पत्नी इलीशिबा गर्भवती भइन्‌ र पाँच महिनासम्म घरबाहिर निस्किनन्‌, किनकि उनी भन्थिन्‌: २५ “मानिसहरूको बीचबाट मेरो अपमान हटाइदिनलाई यहोवाले यसरी अहिले ममाथि ध्यान दिनुभएको हो।” २६ उनी गर्भवती भएको छैटौं महिनामा परमेश्वरले गब्रिएल स्वर्गदूतलाई गालीलको नासरत भन्ने सहरमा २७ एक जना कन्याकहाँ पठाउनुभयो। तिनको नाम मरियम थियो र दाऊदको घरानाको यूसुफ नाम गरेको मानिससित तिनको मगनी भएको थियो। २८ तिनीकहाँ पुगेपछि गब्रिएलले यसो भने: “हे परमेश्वरको निगाह-पात्र, तिमीलाई अभिवादन छ। यहोवा तिमीसित हुनुहुन्छ।” २९ तर यो सुनेर तिनी साह्रै घबराइन्‌ र यो कस्तो खालको अभिवादन होला भनेर सोच्न थालिन्‌। ३० त्यसैले ती स्वर्गदूतले तिनलाई भने: “नडराऊ मरियम, किनकि तिमीले परमेश्वरको निगाह पाएकी छ्यौ। ३१ हेर, तिमीले गर्भधारण गर्नेछ्यौ र एउटा छोरो जन्माउनेछ्यौ अनि तिमीले उहाँको नाम येशू राख्नू। ३२ उहाँ महान्‌ हुनुहुनेछ र सर्वोच्च परमेश्वरको छोरा कहलाइनुहुनेछ अनि उहाँको पुर्खा दाऊदको सिंहासन यहोवा परमेश्वरले उहाँलाई दिनुहुनेछ। ३३ उहाँले राजाको रूपमा याकूबको घरानामाथि सधैंभरि शासन गर्नुहुनेछ र उहाँको राज्यको अन्त कहिल्यै हुनेछैन।” ३४ तर मरियमले स्वर्गदूतलाई सोधिन्‌: “यो कसरी हुनसक्छ किनकि कुनै पुरुषसित मेरो शारीरिक सम्पर्क भएको छैन?” ३५ स्वर्गदूतले तिनलाई जवाफ दिए: “पवित्र शक्ति तिमीमाथि आउनेछ र सर्वोच्च परमेश्वरको सामर्थ्य तिमीमाथि बास गर्नेछ। यो कारणले पनि जो जन्मिनुहुनेछ, उहाँ परमेश्वरको छोरा अनि पवित्र कहलाइनुहुनेछ। ३६ हेर, बाँझी कहलिएकी तिम्रो नातेदार इलीशिबाले पनि बुढेसकालमा गर्भधारण गरेकी छिन्‌ र उनको कोखमा एउटा छोरो छ। उनी अहिले छैटौं महिनामा छिन्‌। ३७ किनकि आफूले बोलेको कुनै पनि कुरा पूरा गर्न परमेश्वरको लागि असम्भव हुँदैन।” ३८ तब मरियमले यसो भनिन्‌: “हेर्नुहोस्, म यहोवाकी दासी हुँ! तपाईंले घोषणा गर्नुभएअनुसारै मलाई होस्।” त्यसपछि स्वर्गदूत तिनीबाट बिदा भए। ३९ तब मरियम तयार भइन्‌ र यहूदाको पहाडी इलाकामा पर्ने सहरमा हतार-हतार गइन्‌। ४० तिनी जकरियाको घरभित्र पसिन्‌ र इलीशिबालाई अभिवादन गरिन्‌। ४१ जब इलीशिबाले मरियमको अभिवादन सुनिन्‌, तब तिनको गर्भमा भएको शिशु उफ्रियो अनि इलीशिबा पवित्र शक्तिले भरिइन्‌ ४२ र ठूलो स्वरमा यसो भनिन्‌: “स्त्रीहरूमध्ये तिमी धन्यकी हौ अनि तिम्रो गर्भको फल धन्यको हो! ४३ मेरो प्रभुकी आमा मकहाँ आइन्‌, मेरो लागि कत्ति ठूलो सम्मान! ४४ किनकि हेर, तिम्रो अभिवादनको आवाज मेरो कानमा पर्नेबित्तिकै मेरो गर्भमा भएको शिशु खुसीले गद्गद भएर उफ्रियो। ४५ तिमीले आफूलाई बताइएको कुरामा विश्वास गऱ्यौ, त्यसैले पनि तिमी आनन्दित हौ, किनकि तिमीलाई यहोवाले भन्नुभएका एक-एक कुरा पूरा हुनेछन्‌।” ४६ अनि मरियमले भनिन्‌: “म यहोवाको गुणगान गाउँछु ४७ अनि म मेरो उद्धारक, मेरो परमेश्वरमा अति आनन्दित नभई रहन सक्दिनँ; ४८ किनकि उहाँले आफ्नी दासीको निर्धनतामाथि नजर गर्नुभएको छ। हेर, अबदेखि उसो सबै पुस्ताहरूले मलाई धन्यको भन्नेछन्‌; ४९ किनकि शक्तिशाली परमेश्वरले मेरो निम्ति ठूलठूला कामहरू गर्नुभएको छ र उहाँको नाम पवित्र छ ५० अनि उहाँसित डराउनेहरूमाथि उहाँको कृपा पुस्तौं पुस्तासम्म रहिरहन्छ। ५१ आफ्नो बाहुबलले उहाँले पराक्रमी कामहरू गर्नुभएको छ। अहङ्कारी मनसाय भएकाहरूलाई उहाँले तितरबितर पार्नुभएको छ। ५२ शासकहरूलाई उहाँले सिंहासनबाट झार्नुभएको छ र दीन अवस्थामा भएकाहरूलाई उचाल्नुभएको छ। ५३ खाँचोमा परेकाहरूलाई उहाँले असल-असल थोकले तृप्त पार्नुभएको छ र धनसम्पत्ति भएकाहरूलाई उहाँले रित्तो हात फर्काउनुभएको छ। ५४ आफ्नो सेवक इस्राएललाई सहायता गर्न र त्यस कृपाबारे सम्झना गराउन उहाँ आउनुभएको छ, ५५ जुन कृपा उहाँले अब्राहाम र तिनको वंशलाई सधैंभरि देखाउनेछु भनी हाम्रा पुर्खाहरूलाई बताउनुभएको थियो।” ५६ लगभग तीन महिना इलीशिबासित बसेर मरियम आफ्नो घर फर्किन्‌। ५७ तब इलीशिबाको सुत्केरी हुने बेला आयो र उनले एउटा छोरो जन्माइन्‌। ५८ जब उनका छिमेकी र नातेदारहरूले यहोवाले उनलाई कृपा देखाउनुभयो भनी सुने, तब तिनीहरू उनीसँगसँगै रमाउन थाले। ५९ अनि आठौं दिनमा तिनीहरू आफ्नो सानो बालकको खतना* गर्न आए र तिनीहरूले उसको नाम पनि बुबाको जस्तै जकरिया राख्न आँटेका थिए। ६० तर उसकी आमाले भनिन्‌: “अहँ, हुँदैन! उसको नाम यूहन्ना राख्नुपर्छ।” ६१ यो सुनेर तिनीहरूले उनलाई भने: “तिम्रो नातागोतामा कसैको पनि यस्तो नाम छैन।” ६२ अनि तिनीहरूले उसको बुबालाई त्यस बालकको नाम के राख्ने भनी इशारा गरेर सोधे। ६३ तब तिनले एउटा काठको पाटी मागे र यस्तो लेखे: “उसको नाम यूहन्ना हो।” यो देखेर तिनीहरू सबै जना छक्क परे। ६४ उत्तिखेरै तिनको मुख खुल्यो र बोली फुट्यो अनि तिनी परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै बोल्न थाले। ६५ अनि छरछिमेकमा बस्ने सबैमा डर छायो र यहूदियाको पहाडी इलाकामा जताततै यही विषयमा चर्चा हुन थाल्यो। ६६ अनि यस विषयमा सुन्नेजति सबैले यो कुरा आफ्नो मनमा राखे र यसो भने: “ठूलो भएपछि यो सानो बालक कस्तो हुने होला?” किनकि ऊमाथि यहोवाको हात थियो भनेर प्रस्टै देखिन्थ्यो। ६७ तब उसको बुबा जकरिया पवित्र शक्तिले भरिए अनि तिनले यस्तो भविष्यवाणी गरे: ६८ “इस्राएलका परमेश्वर यहोवा धन्यका होऊन्‌, किनकि आफ्ना प्रजादेखि टिठाएर उहाँले तिनीहरूलाई छुटकारा दिनुभएको छ। ६९ अनि उहाँले आफ्नो सेवक दाऊदको घरानामा हाम्रो लागि एक जना पराक्रमी उद्धारक* खडा गर्नुभएको छ, ७० जस्तो कि प्राचीन समयका आफ्ना पवित्र भविष्यवक्ताहरूको मुखद्वारा उहाँले बोल्नुभएको थियो। ७१ उहाँले भन्नुभएको थियो, हाम्रा शत्रुहरूबाट र हामीलाई घृणा गर्नेहरू सबैको हातबाट उहाँले हाम्रो उद्धार गर्नुहुनेछ, ७२ हाम्रा पुर्खाहरूको खातिर हामीलाई कृपा देखाउनुहुनेछ र आफ्नो त्यो पवित्र करार सम्झनुहुनेछ, ७३ जुन करार उहाँले हाम्रा पुर्खा अब्राहामसित खानुभएको शपथ थियो। ७४ यसै शपथअनुसार उहाँले हामीलाई शत्रुहरूको हातबाट छुटाउनुहुनेछ र निर्भयतासाथ उहाँलाई पवित्र सेवा चढाउने सुअवसर दिनुहुनेछ, ७५ ताकि वफादार रहेर अनि उहाँको स्तरबमोजिम असल काम गरेर हामी आफ्नो जीवनभर त्यसै गरिरहन सकौं। ७६ तर हे सानो बालक, तिमीचाहिं सर्वोच्च परमेश्वरका भविष्यवक्ता कहलाइनेछौ, किनकि यहोवाको अघि-अघि गएर तिमीले उहाँको बाटो तयार पार्नेछौ, ७७ उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूको पापको क्षमा दिएर उद्धार गर्नुहुनेछ भन्ने ज्ञान दिनेछौ। ७८ हाम्रा परमेश्वरको कोमल करुणाको कारण उहाँले त्यसो गर्नुहुनेछ। माथिबाट आउने यो करुणा बिहानीको उज्यालोजस्तै हुनेछ। ७९ जसले अन्धकारमा र मृत्युको छायामा बसिरहेकाहरूलाई ज्योति दिनेछ अनि हाम्रो पाइलालाई शान्तिको बाटोमा सफलतासाथ डोऱ्याउनेछ।” ८० अनि सानो बालक बढ्दै गयो र उसको बानीबेहोरा र मानसिक झुकाव पनि राम्रो हुँदै गयो। अनि इस्राएलका मानिसहरूसामु खुलेआम देखा नपरुन्जेल ऊ उजाडस्थानमै बसिरह्यो।
^ लूका १:५ * अर्थात्‌, “महान्‌ हेरोदको।”
^ लूका १:१५ * वा, “अङ्गुरबाट बनेको मद्य।”
^ लूका १:१५ * ग्रीकमा न्युमा। अतिरिक्त लेख ७ख हेर्नुहोस्।
^ लूका १:१७ * वा, “बुबाहरूको मन छोराछोरीतर्फ फर्काउन।”
^ लूका १:१७ * ग्रीकमा न्युमा। अतिरिक्त लेख ७ख हेर्नुहोस्।
^ लूका १:५९ * वा, “नेपर्नु।” पुरुष जननेन्द्रियको टुप्पाको छाला काट्नु।
^ लूका १:६९ * शाब्दिक, “उद्धारको सिङ।”